Posky Boeing 777-200 mutsvuku, hapana chiropa, hapana chaipo
mubvunzo Posky Boeing 777-200 mutsvuku, hapana chiropa, hapana chaipo
1 gore 1 mwedzi wapfuura #884 by jangor
Hi, ndakadhinda Posky B777-200 kubva ku Rikooo uye ndakakununura pamwe chete nejiji yegadziriro yekuwana chida. Ndakazviisa zvose zviri zviviri uye ndine ma ndege mana akagara mufora yangu yendege. Zvisinei, pandinovhura, ivo vakachena, hapana mavhiri, hapana anoita, hapana anoziva, hapana jongwe, hapana. Kungoita jena jena.
Ndakatora uye ndakamisa mamwe maB777 akawanda kubva ku Rikooo uye kubva kune dzimwe nzvimbo dzepa freeware, asi nguva dzose dzakafanana. Ndaikwanisa kutaura kuti FSX yangu yakanyonganiswa neB777. Izvozvi, nenzira, zvakaitika kuna De Haviland Dash 8-400. Ndiri kutumirawo chinyorwa chemhepo yakachena.
Ndingakwanisa sei kugadzirisa izvi sezvo iri kutora mitsipa yangu.
1 gore 3 masvondo apfuura #910 by Parky-Joe
The mepu haagoni kuoneka hamuna wainyatsotaura nzvimbo asi.
Endai mumigodhi uye shandurai ipapo shandisai 'preview DirectX 10' uye mabhii enyu anofanira kunge aripo. Ndakanga ndine nyaya imwechete ini uye ndangotarisa nzira yekugadzirisa nayo kuburikidza nemavhiki ekuedzwa uye kukanganisa. Tariro iyo inoshanda kwauri.
Time chokusika peji: 0.395 mumasekonzi